Home Wararka Maxaa loo hakiyay doorashadii maanta ka dhici laheyd Baledweyne?
Maxaa loo hakiyay doorashadii maanta ka dhici laheyd Baledweyne?
Sida ay sheegyaan wararka ka soo baxaya magalaada Jowhar, waxaa dib u dhac uu ku yimid doorashada lix kursi oo mid ah kuraasta Golaha Shacabka Baarlamaanka Soomaaliya oo Maanta oo Sabti ah lagu waday in magaalada Baledweyne ay ka qabsoonto.
Guddiga doorashada maamulka Hirshabeelle ayaa war qoraal ah oo kasoo baxay Xalay waxay ku sheegeen in doorashadii maanta la qaban lahaa uu dib u dhac ku yimid sababo la xariira arrimo farsamo awgood. Maanta ayaa la filayaa xildhibaanada in ay qaataan shaahada halka doorashada berina ay doorashada dhacdo.
Kuraasta doorashadooda Maanta la qaban lahaa ee dib u dhaca ku yimid ayaa kala HOP 006, HOP 022, HOP 003, HOP 032, HOP 252, HOP 068. “Guddiga Doorashada Hirshabelle (SEIT) waxa uu ku wargalinaya dhamaan umadda Somaaliyeed iyo Murashixiinta in uu dib u dhac ku yimid qabsoomida doorashadii loo madlanaa in maanta qabto Sababo Farsamo awgeed” ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay guddiga doorashada Hirshabeelle”
Guddiga ayaa sidoo kale sheegay in doorashada 6-da kursi ay qaban doonaan maalinta berito oo Axad ah, waxaana warar hoose oo ay heshay Shabakadda HOL ay sheegayaan in doorashada ay u baaqatay khilaaf soo kala dhexgalay madaxda sare ee Hirshabeelle iyo guddoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan oo ka horyimid doorashada Maanta Baledweyne ka dhici laheyd.
Ciidamo aad u hubeysan oo ka amar qaata guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan ayaa xirtay mid ka mid ah hoolalka lagu qabto doorashada ka socota magaalada Baledweyne, waxaana la sheegay in guddoomiyaha uu ka carooday inuusan wax door ah ku laheyn doorashada kuraasta Golaha Shacabka ee ka socota Baledweyne, islmarkaana waxii dhaqaalo ah ay ku dhacayaan madaxweyne Guudlaawe iyo ku xigeenkiisa Yuusuf Dabageed.
Xerada Lamagalaay oo ah goobta ay ka socoto doorashada kuraasta taala magaalada Baledweyne ayaa waxaa ku wada sugan ciidamo farabadan oo kala taabacsan masuuliyiin kala duwan waxaana ilaa xalay xerada laga daremay culeyso amni oo sababi kara isku dhacyo dhexmari kara ciidamada kala duwan ee halkaasi kuwada sugan.
Previous articleU.S. restricts visas for Somali officials accused of undermining democracy
Next articleMaxaa ka soo baxay kulankii Saciid Deni iyo Isimada Gobolka Bari?
Madaafiic lagu weeraray Madaxtooyada Baydhabo & Airportka
Xasuuq ka dhacay duleedka degmada Dhuusamareeb